Mampiditra editor ebook i Caliber, fifaninanana avy any Sigil amin'ny ho avy? | Ireo mpamaky rehetra
Mampiditra editor ebook i Caliber, fifaninanana avy any Sigil amin'ny ho avy?
Joaquin Garcia | | fakan-tahaka toa, eBooks, Sigil
Angamba ny vaovao amin'ny volana angamba fa tsia. Fa vao haingana, Nanampy mpanonta ebook i Caliber izay hahafahan'ny mpampiasa Caliber afaka manova ebook avy amin'ilay fitaovana mihitsy nefa tsy mila mampiasa fitaovana hafa toy ny Sigil. Ny mpanonta ebook dia nampidirina tamin'ny 13 Desambra tao Caliber niaraka tamin'ny fanavaozana, saingy izao, taorian'ny famoahana ny fanavaozana Andro krismasy ( tsy isika irery no manome fanomezana) rehefa lasa manan-danja sy mahery vaika kokoa ao amin'ny Caliber ilay tonian-dahatsoratra ebook satria mamela fanovana fanampiny hatao.
Herinandro vitsivitsy lasa izay dia nahalala ny vaovao mampalahelo momba ny fandaozana vetivety an'i Sigil, fitaovana Rindrambaiko Maimaimpoana izay nanome valiny tsy mampino rehefa mamorona ebooks ary amin'ny vidiny mahatsikaiky: maimaim-poana ny programa. Toa ny vondrom-piarahamonina Sigil ary koa ny an'ny fakan-tahaka toa Tsy nijanona niaraka tamin'ny tànany talohan'ity vaovao ity izy ireo ary fakan-tahaka toa nandray an-tanana mba tsy hanadino ireo fitaovana rindrambaiko fanovana ebook maimaimpoana. Amin'izao fotoana izao dia tsy misy na inona na inona nohamafisin'i Caliber momba ny fandraisana ireo andalana Sigil, fa taloha ela be, ny mpamorona an'i Sigil niresaka fanovana ho Github araka ny tolo-kevitr'ireo mpamolavola Caliber, azo antoka tokoa fa ny tonian-dahatsoratr'i Caliber ebook dia zanakalahin'i Sigil.
Inona no ao amin'ny tonian'ny ebook Caliber
Mpanonta ebook ananantsika anio fakan-tahaka toa Vokatry ny fanavaozam-baovao telo izay nanambatra fitaovana ho an'ny tonian-dahatsoratra hamorona ebook avy any Caliber. Ity tonian-dahatsoratra ity dia mampiasa ny fiteny fanamarihana html, noho izany dia tsy ho sarotra ho an'ny mpamorona tranonkala. Anisan'ireo fanampiana farany natao, ny mety an mamorona ebook avy amin'ny rangotra, amboary ireo tag sy metawords an'ny epub ary, nohatsaraina ny fanontana ireo fomba izay manatsara ny lafiny fahitana an'ilay boky. Inona koa, Vondrona fampandrosoana calibre efa afaka tranonkala iray hianatra ny fomba fikirakirana an'ity ebook editor ity, koa toa mikasa ny hanitatra mihoatra ny maha mpitantana ebook tsotra azy i Caliber.
Ny fanavaozana misy fetr'andro fohy toy izany hijerena ny vokany dia mahalana no anoroana azy, saingy mazava ho azy, tsy izany no izy. Toa tsy mahaliana fotsiny ny fanavaozana fa ilaina, satria ity fanavaozana farany ity dia manatsara kokoa ny tonian-dahatsoratra ebook bebe kokoa, ka mahatonga azy io ho endrika iray hafa izay mamporisika antsika hampiasa ity programa ity. Etsy ankilany, toa izany miaraka amin'ny fihenan'ny sigil ary miaraka amin'ny fandrosoan'ny teknolojia vaovao, indrindra amin'ny sehatry ny DRM, ny fananganana mpanonta ebook vaovao dia toa tsy maintsy atao ary toa milaza zavatra momba izany koa i Caliber.
Fanazavana fanampiny - Tandindomin-doza hanjavona i Sigil, Booktype manampy anao mamorona boky amin'ny Internet,
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Ireo mpamaky rehetra » Software » fakan-tahaka toa » Mampiditra editor ebook i Caliber, fifaninanana avy any Sigil amin'ny ho avy?